Kooxda;Real Madrid Ma Sameyn Doontaa Soo Laabasho Cajiib Ah Habeen Danbe Oo Ma U Soo Bixi Doonaan Semi-finalka Champions League?
Real Madrid waxaa sugeysa howl adag habeen danbe’ waxa ay doonayaan inay dhanka kale u rogaan natiijo 2-0 ah oo looga soo badiyay lugtii hore ee wareega 8 da Champions League ee Wolfsburg, waxaana ay habeen danbe lugta labaad ku ciyaarayaan Santiago Bernabeu. Hiiraan Xog Real Madrid oo 10 jeer ku guuleysatay koobkaan ayaa taariikh u leh inay Bernabeu ku sameyso soo laabasho...
Kulanka Caawa Ee Kooxda Borussia Dortmund VS Kooxda Liverpool
Kooxda Borussia Dortmund VS Kooxda Liverpool Kulanka Jurgen Klopp derby ayaa caawa ka dhacaya Jarmalka iyadoo tababaraha Liverpool uu aad ugu faraxsan yahay inuu tuso kooxdiisa garoonka cajiibka ah ee Signal Iduna Park iyo magaalada weyn ee Dortmund. Hiiraan Xog Ka dib markii ay isku soo aadeen labada kooxood wareega 8da Europa League, Klopp ayaa yiri: “Aad ayaan ugu...
Kulanka Caawa Dhaxmaridoono Labada Kooxod Ee Man City & Paris Saint-Germain,
Kooxda Manchester City iyo Kooxda Paris Saint-Germain ayaa qarashgareeyay boqolaal milyan si qeyb uga noqdaan kooxaha waa weyn ee Yurub, laakiin ugu danbeyn dagaalkooda caawa waxa uu isagu soo biyo shubanayaa mid u dhaxeeya Zlatan Ibrahimovic iyo Sergio Aguero. Dhamaan xiddigaha waa weyn ee soo galaya garoonka Parc des Princes’ waa ay adag tahay in la fiiriyo meel...
Masuliyiinta’Premier Leaque-ga Oo Shaaciyay Garsoorayaasha Dhex Dhexaadin Doona Kulamada 33 Aad Ee Horyaalka Ingiriiska.
Maamulka Premier Leaque-ga ayaa shaaciyay garsoorayaasha dhex dhexaadin doona kulamada 33 aad ee horyaalka Ingiriiska, waxaana kulamadan ku jira kulamo xiiso badan oo saamayn ku yeelan kara kala saraynta Premier Leaque-ga.Kooxda hogaanka haysa ee Liecester City ayaa markale fursad fiican u haysata in ay hogaanka todoba dhibcood ah sii dheeraysan karto marka ay booqato...
Classico Qaab Ciyaareedkiisi Sanadkii Hore BBC Iyo MSN Iyo Waxyaabo Kale Uu Ka Hadlay Gareth Bale
Garabka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa la hadlay saxaafada ka hor kulanka adag ee la wada sugayo ee todobaad dhamaadkaan dhexmari doona kooxaha ugu waa weyn Spain ee Barcelona vs Real Madrid ee ka dhacaya garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona. Hiiraan Xog Qaab ciyaareedkiisii sanadkii hore ‘Xili ciyaareedkii hore si fiican uma aanan ciyaarin’ xitaa...
Xanta Jose Mourinho iyo Kooxda Arsenal Oo warar kaladuwan ka Soo Baxayaan”
Warkeysyada Dalka Spain ayaa shaacisay in Arsenal ay dooneyso tababare Jose Mourinho si loogu badelo booska Arsene Wenger oo sanado badan wax guulo wayn ah u keeni waayay kooxda. Hayeeshee war saakay soo baxay oo la sheegay inuu ka yimid gudaha Arsenal ayaa beeniyay warkaa iyagoona ku sheegay war micno darro ah. Hiiraan Xog Laakiin war hor leh ayuu soo sheegay warsidaha...
kooxaha Bayern Munich vs Juventus oo caawa wada balansan
Waxaa caawa kulan xiise badan oo aan weli lagu kala bixin ku ballansan kooxaha Bayern Munich vs Juventus. Hiiraan Xog Kooxda kubada cagta ee Juve ayaa lugtii hore garoonkeeda wax ku bareejeysey iyadoo caawa doonaysa inay ka roonaato sidii hore, kooxda Juve ayaa dhaarsan waloow ay ka dhaawacan yihiin Chiellini, Marchisio iyo Dybala. Dhanka kale, cimilada Allianz Arena...
Kooxda Hegan Oo Galabta Garacday Kooxda Horseed
Kooxda Heegan ayaa guul ka gaartay naadiga Horseed ciyaar ka tirsan horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. Hiiraan Xog Kulanka ayaa ku bilaawday si dar dar ah iyadoo gool la hormartay Heegan waxaana u dhaliyay xiddiga weerarka ee Jabriil Xasan Fariid. Qeybtii hore ee Ciyaarta oo gab gabo ku dhaw kooxda Horseed ayaa la timid goolkii bar baraha waxaanau dhaliyay xiddiga...
Hor Dhac Kulanka Caawa’ Ee Liverpool Vs Manchester United
Liverpool waxa ay caawa gegida Anfield ku qaabili doonta Man United oo ay isku fara saari doonaan lugta hore ee wareega 16-ka Europa League. Afartii kulan ee isugu dmabeeysay waxa adkaatay Red Devils balse caawa ayuu war jiraa. Hiiraan Xog Liverpool James Milner waxaa kaarka cas loo taagay kulankii ay Liverpool 2-1 uga badisay Crystal Palace laakiin ganaaxiisa uma talaabi...
Carl Jenkinson oo dib ugu Soo Laabtay Tababarka Kooxda Arsenal
Carl Jenkinson ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Arsenal, kaddib heshiis amaah ah oo uu ku soo qaatay kooxda West Ham United” dhaawacna uu gaabiyey. 24-sano jirkaan ayaa la dhibtoonayey dhaawac xilli ciyaareedkii dhammaaday, waxaana uu dhaawac jilibka ka soo gaaray kulankii barbaraha 2-2 dhammaaday oo ay West Ham la yeelatay Manchester City bishii Janaayo, ka...